Sheekada Filimka Ittefaq: Akshaye Khanna oo hareeyay Sidharth Malhotra iyo Sonakshi Sinha | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Filimka Ittefaq: Akshaye Khanna oo hareeyay Sidharth Malhotra iyo Sonakshi Sinha
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Ittefaq oo sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimkii Ittefaq ee sanadii 1969 Superstar Rajesh Khanna sameeyay balse sheekadiisa dib loo casriyeeyay.
Hogaaamiyaasha filimkaan: Sidharth Malhotra, Akshaye Khanna, Sonakshi Sinha
Soo saarayaal: Red Chillies Entertainment iyo Dharma Productions
Waqtiga uu soconaayo: 1-saac iyo 40-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Ittefaq: Akshaye Khanna bandhigiisa cajiibka ah, Qayaanada iyo sida kiiska dilka loo baarayo iyo sida filimkaan ku dhamaanayo ama uultimadiisa.
Muxuu Ku Liitaa Ittefaq: Dhacdooyinka qaar aan xoogaa ka daadageynin iyo muusig aan loo yeelinin filimkaan
Daawo Ama Ha Daawanin: Waa qasab inaa Ittefaq daawatid weliba hal mar indhaha lagama weecin karo sida kiiska dilka loo baarayo iyo isbada mareeska meesha yaalo, waana filim qof walbo daawashadiisa ku raaxeesan karo.
Fariinta Filimka Ittefaq: Filimkaan wuxuu ku qotomaa labo kiis oo dil ah, labo qof oo looga shakisan yahay, askariga baarayo iyo hal habeen in dilka la geestay!
Vikram Sethi (Sidharth Malhotra) waa qoraa kaasi oo dalka u joogo inuu soo bandhigo buugiisa xiga oo la wada sugaayo balse booliska ayaa u racadeesanayaan inuu ka dambeeyo kiiska dilka xaaskiisa Catherine (Kimberly Louisa McBeath) oo xili habeen ah dhacay.
Vikram Sethi (Sidharth Malhotra) sida loo bursanaayo wuxuu galaa ama la kulmaa Maya (Sonakshi Sinha) oo aqalkeeda joogto.
Maya (Sonakshi Sinha) waxaa qabo qareenka lagu magacaabo Shekhar laakiin habeenka Vikram Sethi (Sidharth Malhotra) uu soo galo asigoo dhibane ah aqalka Maya waxaa goobta ka dhacaayo kiis dil ah oo lagu dilaayo Maya seygeeda!
Maya (Sonakshi Sinha) waxay waceysaa booliska si ay u wargaliso in seygeeda Shekhar la dilay kadibna booliska waxay goobta ka kaxeenayaan Maya iyo Vikram.
Vikram Sethi (Sidharth Malhotra) booliska waxay u xirayaan inay su’aalo weydiiyaan waxa uu ka qabanaayay guriga Maya waana arin ku culus inuu sharaxaad ka bixiyo.
Maya (Sonakshi Sinha) iyadana waxaa saldhiga loo geynaa in su’aalo laga weydiiyo kiiska dilka seygeeda Vikram.
Vikram iyo Maya labadooda wareysiga laga qaado sheekooyin kala duwan ayay booliska ugu sheegayaan laakiin hadaladooda ayay runta ku dhex jirtaa ama booliska runta ku hagi karto!
Dambi baaraha xariifka ah sidoo kalena mayalka adag Dev (Akshaye Khanna) ayaa loo xil saaraa inuu banaanka soo dhigo labada kiis dilka ah ee halka habeen dhacay loogana shakisan yahay inay ka dambeeyaan Vikram Sethi (Sidharth Malhotra) iyo Maya (Sonakshi Sinha).
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Ittefaq: Director Abhay Chopra oo uu awoowe u yahay ruug cadaa Br Chopra marnaba looma maleeyo in Ittefaq yahay shaqadiisa ugu horeesay.
Waxba kama uusan qaldin qaabka dambiga loo baarayo, kiiska isku wareersan iyo sida loo fahmi lahaa dilaaga ilaa dhamaadka filimka laga gaarayo sidaa darteed Abhay Chopra wuu u hagar baxay Ittefaq-ii la sameeyay 1969.
Abhay Chopra wuxuu kale uu ku amaanan yahay in Ittefaq oo fariin adag xambaarsan inuu kusoo dhex daray xoogaa shactiro qalbi fur ah oo daawadayaasha ku nafisi karaan gaar ahaan shactirada ay booliska sameenayaan oo laga heli karo mada daalo wacan.
Bandhiga Jilaayaasha: Qaab jiliinka ugu wacan filimkaan Akshaye Khanna ayaa la yimid hadaladiisa, xarakaadka uu sameenayo iyo sida uu dambiyada u baarayo ayaa ah waxa ugu weyn aad xasuusan doontid marka aad Ittefaq daawatid.
Akshaye doorkiisa waxaa xiiso u yeelayo in dambiga uu baarayo yahay Sidharth oo ku adkeesanayo inuusan xaaskiisa dilin sidoo kalena dilka Sonakshi seygeeda wax shaqo ah ku laheyn halka Sonkashi ay ku eedeeneyso Sidharth inuu seygeeda dilay!
Sidharth Malhotra oo ah hogaamiyaha filimkaan bandhig fiican ayuu la yimid sidoo kalena muuqaalada qaar si heer sare ah ayuu u sameeyay markalena xidigaan door dhib badan ayuu ka baxsaday.
Sonakshi Sinha doorkeeda waa mid wacan, xasiloon sidoo kalena qayb ka ah sheekada filimkaan inta badana saameynteeda muuqado.
Sida guud Sidharth iyo Sonakshi bandhigooda Ittefaq ma xumo laakiin sida hooskii oo kale waxaa u hareeyay Akshaye Khanna oo qaab jiliin cajiib badan lasoo baxay.
Gunanaad: Ittefaq waa filim qayaano iyo cabsi si wacan loo sameeyay sidoo kalena jilaayaasha bandhigooda wacan yahay, balse filimka oo muusig laheyn, xayeysiis balaaran loo sameynin waxay sababi doontaa in fagta hore daawadayaal badan tiyaatarada soo aadin waxaana macquul ah in maal maha sabtiga iyo axada inay reer magaalka usoo daawasho tagaan hadii dadka isku sheeg sheegaan fiicnaantiisa.
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan sheekada filimka Ittefa waxay siiyeen sedex dhibic (3/5) waana sheeko fiican oo la daawan karo.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Ittefaq:
Waxaa Aqrisay 1,809